Healthcare workers pose forapicture at the Ayawaddy coronavirus disease (COVID-19) treatment center in Mandalay, Myanmar February 3, 2021. Prof Cho Mar Lwin/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALE
ကိုဗစ်-19 ရောဂါဖြစ်ပြီး နာလန်ထလာချိန်မှာ၊ နုံးချည့်၊ ဆုံးဖြတ်ရခက်၊ ရုတ်တရက်မူးဝေ၊ အဆုပ်ထိခိုက်တာအပြင်၊ နောက်ဆက်တွဲ သတိပြုစရာတွေလည်း ရှိနေသေးတယ်လို့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေက သတိပေးပြောဆိုပါတယ်။
အခုလို နောက်ဆက်တွဲ သတိပြုစရာတွေကတော့၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (Psychiatric) ပြဿနာ (၂) ခု၊ ချောင်းဆိုးတာနဲ့ ဝမ်းလျှော ဝမ်းချုပ်တာတွေပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဓိက ပြဿနာတစ်ခုကတော့ PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) ခေါ် ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာကြီးဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်ခုကတော့ Survival Guilt ခေါ် မသေဘဲကျန်ခဲ့သူရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ခံစားရတဲ့အပြစ်ဒဏ်ပါ။ PTSD စိတ်ဒဏ်ရာကြီးကတော့ စစ်ပွဲတွေနဲ့ သဘာဝဘေးဒဏ်တွေလို သေရေးရှင်ရေးကြုံခဲ့ရသူတွေမှာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို၊ ထပ်ပြန်တလဲလဲ ပြန်မြင်ယောင်တဲ့ (Flesh back) စိတ်ဖိစီးမူဒဏ် အကြီးအကျယ်ခံစားရတာပါ။ Survival Guilt ကတော့ မိသားစုဝင်တွေ ကိုယ့်မျက်စေ့ရှေ့ မှာ သေဆုံးခဲ့ရပြီး၊ မသေဘဲ ကျန်ရစ်ခဲ့သူက သူတို့မကယ်နိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ် စိတ်ထိခိုက်ပြီိး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲ ပြန်ပြီးအပြစ်တင်နေမိတဲ့ စိတ်ဖိစီးမူကြီးပါ။ တချို့တွေမှာ အိပ်မရအောင်ထိ အဲဒါတွေကို ပြန်မြင်ယောင်ကာ ဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။
စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသမူခံယူဖို့လည်း အားနည်းလေ့ရှိတဲ့ မြန်မာအပါအဝင် အရှေ့ တောင်အာရှမှာ ဒီရောဂါဝေဒနာကို ပိုခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေအပါအဝင် တခြားမှာတော့ ဒီအတွက် လနဲ့ချီ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုင်ပင်ကုသမူခံယူကြလေ့ ရှိပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ အရှေ့ တောင်အာရှနိုင်ငံအများစုမှာ၊ အခုလို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေ ဖြစ်လာတာကို စိတ်ရောဂါကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ ပြလေ့မရှိဘဲ၊ အခြေအနေဆိုး စိတ်ရောဂါဖြစ်မှသာ ပြရတာလို့ မှားယွင်း ယူဆကြလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်က အခုလို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားမူလက္ခဏာတွေ ပြလာချိန်မှာ၊ နီးစပ်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ ပြသပြီး တိုင်ပင်ကုသမူ ခံယူဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သို့မဟုတ်ပါက အသက်အန္တရာယ်တွေ ပေးလာတဲ့အထိ၊ ပြင်းထန်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ကြုံလာနိုင်လို့ပါ။ တကယ်တော့၊ အီတလီနိုင်ငံမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိဖြစ်နေသလို၊ ကိုဗစ်ကြောင့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူတွေ အများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ကာ အလားတူ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ ကြုံခဲ့ရတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ထပ် နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ချောင်းဆိုးတာကတော့ အဖြစ်နည်းပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်လာခဲ့လျှင်လဲ ဆရာဝန်ပြကာ ချောင်းဆိုးသက်သာစေတဲ့ ဆေးတွေနဲ့ ပြန်ကောင်းသွားလေ့ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ ဝမ်းလျှော၊ ဝမ်းပိတ်တာကလည်း အလားတူအဖြစ်နည်းပြီး၊ ဖြစ်လာလျှင်လည်း ဝမ်းလျှောသူတွေအတွက် ဝမ်းပိတ်ဆေးနဲ့ Probiotic (ဝမ်းလျောရာမှာပါသွားတဲ့ အူထဲက ကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ ပြန်ဖြည့်ဆေး) တွေနဲ့ သက်သာသွားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဝမ်းပိတ်တာကတော့ တချို့ သတင်းအချို့ အရ တွေ့ထားရပေမယ့် လက်တွေ့မှာ မဖြစ်သလောက် ရှားလွန်းပါတယ်။
ဒီအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်ဖို့ ကိုဝင်းမင်း က နယူးယောက်မြို.မှာ ကိုဗစ်လူနာတွေကို ကိုင်တွယ်ကုသနေရပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံက ကိုဗစ်လူနာတွေကိုလည်း ဖုန်းကတဆင့် ကူညီကုသပေးနေတဲ့ Wyckoff Heights ဆေးရုံက၊ ကူးစက်ရောဂါအထူးကု ဒေါက်တာဇေယျာသက်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
ကိုဗဈ-19 ရောဂါဖွဈပွီး နာလနျထလာခြိနျမှာ၊ နုံးခညျြ့၊ ဆုံးဖွတျရခကျ၊ ရုတျတရကျမူးဝေ၊ အဆုပျထိခိုကျတာအပွငျ၊ နောကျဆကျတှဲ သတိပွုစရာတှလေညျး ရှိနသေေးတယျလို့ ကနျြးမာရေးပညာရှငျတှကေ သတိပေးပွောဆိုပါတယျ။
အခုလို နောကျဆကျတှဲ သတိပွုစရာတှကေတော့၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ (Psychiatric) ပွဿနာ (၂) ခု၊ ခြောငျးဆိုးတာနဲ့ ဝမျးလြှော ဝမျးခြုပျတာတှပေါ။ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အဓိက ပွဿနာတဈခုကတော့ PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) ချေါ ပွငျးထနျတဲ့ စိတျဒဏျရာကွီးဖွဈပွီး၊ နောကျတဈခုကတော့ Survival Guilt ချေါ မသဘေဲကနျြခဲ့သူရဲ့ စိတျထဲမှာ ခံစားရတဲ့အပွဈဒဏျပါ။ PTSD စိတျဒဏျရာကွီးကတော့ စဈပှဲတှနေဲ့ သဘာဝဘေးဒဏျတှလေို သရေေးရှငျရေးကွုံခဲ့ရသူတှမှော ဖွဈခဲ့တာတှကေို၊ ထပျပွနျတလဲလဲ ပွနျမွငျယောငျတဲ့ (Flesh back) စိတျဖိစီးမူဒဏျ အကွီးအကယျြခံစားရတာပါ။ Survival Guilt ကတော့ မိသားစုဝငျတှေ ကိုယျ့မကျြစရှေ့မှေ့ာ သဆေုံးခဲ့ရပွီး၊ မသဘေဲ ကနျြရဈခဲ့သူက သူတို့မကယျနိုငျခဲ့တဲ့အပျေါ စိတျထိခိုကျပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို အမွဲ ပွနျပွီးအပွဈတငျနမေိတဲ့ စိတျဖိစီးမူကွီးပါ။ တခြို့တှမှော အိပျမရအောငျထိ အဲဒါတှကေို ပွနျမွငျယောငျကာ ဒုက်ခရောကျကွရပါတယျ။
စိတျဒဏျရာတှကေို စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ကုသမူခံယူဖို့လညျး အားနညျးလရှေိ့တဲ့ မွနျမာအပါအဝငျ အရှတေ့ောငျအာရှမှာ ဒီရောဂါဝဒေနာကို ပိုခံစားရလရှေိ့ပါတယျ။ အနောကျနိုငျငံတှအေပါအဝငျ တခွားမှာတော့ ဒီအတှကျ လနဲ့ခြီ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ တိုငျပငျကုသမူခံယူကွလေ့ ရှိပါတယျ။ မွနျမာနဲ့ အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံအမြားစုမှာ၊ အခုလို စိတျပိုငျးဆိုငျရာပွဿနာတှေ ဖွဈလာတာကို စိတျရောဂါကြှမျးကငျြသူတှနေဲ့ ပွလမေ့ရှိဘဲ၊ အခွအေနဆေိုး စိတျရောဂါဖွဈမှသာ ပွရတာလို့ မှားယှငျး ယူဆကွလရှေိ့ပါတယျ။ တကယျက အခုလို စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ခံစားမူလက်ခဏာတှေ ပွလာခြိနျမှာ၊ နီးစပျရာ ကြှမျးကငျြသူတှနေဲ့ ပွသပွီး တိုငျပငျကုသမူ ခံယူဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ သို့မဟုတျပါက အသကျအန်တရာယျတှေ ပေးလာတဲ့အထိ၊ ပွငျးထနျတဲ့ ဆိုးကြိုးတှနေဲ့ ကွုံလာနိုငျလို့ပါ။ တကယျတော့၊ အီတလီနိုငျငံမှာလညျး မွနျမာနိုငျငံမှာ လကျရှိဖွဈနသေလို၊ ကိုဗဈကွောငျ့ အသကျအရှယျကွီးရငျ့သူတှေ အမြားကွီးဆုံးရှုံးခဲ့ကာ အလားတူ စိတျပိုငျးဆိုငျရာတှေ ကွုံခဲ့ရတာကို တှခေဲ့ရပါတယျ။
နောကျထပျ နောကျဆကျတှဲတဈခုဖွဈတဲ့ ခြောငျးဆိုးတာကတော့ အဖွဈနညျးပါတယျ။ အဲဒီလို ဖွဈလာခဲ့လြှငျလဲ ဆရာဝနျပွကာ ခြောငျးဆိုးသကျသာစတေဲ့ ဆေးတှနေဲ့ ပွနျကောငျးသှားလရှေိ့ပါတယျ။ နောကျတဈပိုငျးဖွဈတဲ့ ဝမျးလြှော၊ ဝမျးပိတျတာကလညျး အလားတူအဖွဈနညျးပွီး၊ ဖွဈလာလြှငျလညျး ဝမျးလြှောသူတှအေတှကျ ဝမျးပိတျဆေးနဲ့ Probiotic (ဝမျးလြောရာမှာပါသှားတဲ့ အူထဲက ကောငျးတဲ့ ဘကျတီးရီးယားပိုးတှေ ပွနျဖွညျ့ဆေး) တှနေဲ့ သကျသာသှားလေ့ ရှိပါတယျ။ ဝမျးပိတျတာကတော့ တခြို့သတငျးအခြို့အရ တှထေ့ားရပမေယျ့ လကျတှမှေ့ာ မဖွဈသလောကျ ရှားလှနျးပါတယျ။
ဒီအကွောငျး ပိုမိုသိရှိနားလညျနိုငျဖို့ ကိုဝငျးမငျး က နယူးယောကျမွို.မှာ ကိုဗဈလူနာတှကေို ကိုငျတှယျကုသနရေပွီး၊ မွနျမာနိုငျငံက ကိုဗဈလူနာတှကေိုလညျး ဖုနျးကတဆငျ့ ကူညီကုသပေးနတေဲ့ Wyckoff Heights ဆေးရုံက၊ ကူးစကျရောဂါအထူးကု ဒေါကျတာဇယြောသကျကို ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။